We Fight We Win. -- " More than Media ": မူစလင်များ အတွက် မြန်မာ အစိုးရ ဟာ လုံခြုံမှုမပေးနိင်တော့ပါ။
မူစလင်များ အတွက် မြန်မာ အစိုးရ ဟာ လုံခြုံမှုမပေးနိင်တော့ပါ။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်အောက်မှာ မူစလင်များ ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အတွက်လုံခြှုံမရှိတော့ပါ။
မိထိလာမှာ ထောင်နှင့်ချီသော ဆင်းရဲ သား မူစလင်းများ ဆောက်တည်ရာမရပဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြကြောင်း သတင်းများရရှိနေပါတယ်။
နိင်ငံတကာရောက်မူစလင်များ မြန်မာသံရုံးများရှေ့ သို့ သွားရောက်
ဆန္ဒပြ ပေးကြဖို့ တရားဥပဒေ အရကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါ။ ဗုဒဘာသာနဲ့မူစလင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တောင်းဆိုပါ။ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာရှိသင်တို့ အမျိုး များ၊ မိတ်ဆွေများ လုံခြံမှု မရှိတော့ပါက ရန်ကုန် မြို့ ရှိ
ကုလသမဂရုံး၊ အမေရိကန် သံရုံး၊ သြစတေးလျသံရုံး၊ ဥေ၇ာပ နိင်ငံများ ရဲ့သံရုံးများ ၊ ကနေဒါ
နိင်ငံသံရုံးများ သို့ယာယီခိုလှုံ နိင်ကြောင်း သတင်း ပါးလို က် ပါတယ်။
လူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ မတူခြားနားသောဘာသာဝင်လူနည်းစုများအားနိင်ထက်ညင်းပန်း ပြုသော သူများကိုရှုတ်ချပါတယ်။ မိထိလာ အဓိကရုဏ်းကိုမီးမွေးပေးတဲ့ ၀ီရသူ၊ ခင်ညွန့်နှင့် ခင်ရွေ တို့ အဖွဲ့ များကို ရှုတ်ချတယ်။
အဓိကရုဏ်းကြောင့် အပြစ်မဲ့ဗုဒဘာသာနှင့် မူစလင်များ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ စစ်အုပ်စုလုပ်အောက်မှာ မြန်မာ လူများစုတွေ လုံခြုံ မှုကင်းမဲနေတာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမိုးသီး ခင်ဗျားစိတ်ကော မှန်သေးရဲ့လားဗျ။
ငယ်သောအမှု့ ပျောက်စေ ဖြစ်ရမှာကို
ခင်ဗျားဟာက မကြီး ကြီးအောင်
မဆိုး ဆိုးအောင် မြှောက်ပေးနေပါလား။
ဇာတ်လမ်း ဘယ်လိုစတယ်ဆိုတာလဲ လူတိုင်း
သိတယ်။ ဆူခြင်ပူခြင်တဲ့ လူတစ်စု
(ဗမာ/ကုလား နှစ်ဖက်လုံး) က ဖျက်လို
ကျမ်းနေတာကို ကုလား တစ်ဖက်ထဲကပဲ
They'd better go to Arab, Indian and Pakistan Embassies not US, Aussie and European Embassies.
What the hell fucking post and idea, in myanmar everybody are suffer not only muslim, if you only worry for them just let them go to Arab if they fell not save in myanmar..
yes, let us go to US like that guy moetheezun, then shout to call out the people onto the street.
How stupid this guy,
yes, let us go to US like that guy moetheezun, then shout to call out the people onto the street.How stupid this guy,
ကိုမိုးသီး ... ခင်ဗျားက ကုလားကပြားဖြစ်လို့ ကုလားဘက်က နာတာကိုထည့်မပြောတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားလုပ်ပုံက တဘက်သတ်အရမ်းကျနေပြီး အဆမတန်ကို ချဲ့ထွင်ကိုးကားထားတယ်။ ခင်ဗျားက နိုင်ငံရေးထင်ပေါ်မှုလိုချင်လို့ လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်း တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ထိခိုက်နှစ်နာမှုမရှိအောင် ဘလော့ဂ်မှာ ချိန်ချိန်ဆဆနဲ့တော့ လုပ်ပါဗျာ။ ခင်ဗျားလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ စားလာခဲ့ဘူးတဲ့ ထမင်း မျက်နှာကိုထောက်ပါဦးလို့....
မင်းလည်း ကိုယ့်မေကိုယ်လိုး စောက်ရူးပဲ အားတော့နာပါတယ် ပြောရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိဖို့ ကောင်းတယ် မွတ်ဆလင်ကုလားက အင်အားသာရှိကြည့် ရခိုင်သေ ဗမာသေ တခြား ဘယ်လူမျိုးမဆို သေမှာပဲ ဆုံးမရာ ဘာသာကိုက ဘာသာတရားမဟုတ်ပဲ ဘာသာမတရားဖြစ်နေတာကိုး
နေရာမရ ပတ်မကြီး ထိုးဖောက်တတ်တဲ့ ခင်ဗျားအကြောင်းကို ကျောင်းသားတပ်မတော်က ရဲဘော်ဟောင်းတွေ တော်တော်များများ သိကြပါတယ်
အခုလို ဖြစ်ပျက်နေတာတောင် အမှန်တရား ကို ဘက်လိုက်မှု မရှိ မပြောဆိုဘဲ တဖက်သတ်ပြောဆိုနေခြင်းက ခင်ဗျားရဲ့ အရည်အချင်း ကဒီထက်ပိုပြီး ဘာအစွမ်းမှမရှိဘဲ ကုလားတွေရဲ့ ထောက်ပံမှု့ နဲ့အသက်ရှင် နေရတဲ့ ခင်ဗျားက လက်ကြောကလည်း မတင်းတော ဒါကြောင့်လဲ ကုလားဘက်မှ ရှေနေမလိုက်ရင် ငတ်ဖို့ ရှိတော ဒါကြောင့်အရဲစွန့် ပြီး ဟောင်တာမဆန်းပါ။ ဆက်လက်ပြီးများများ ဟောင်ပါ။ အဲ့ဒီစောက်ကျင့်တွေ မပျင်လို ရဲဘော်အများစုကြားမှာ လူရာမဝင်တဲ့ ခင်ဗျာဘဝက အသက်ရှင်နေချင်းထက် သေတာကမှ ပိုကောင်းမယ်
တောတွင်တစ်နေရာတွင် ခင်ဗျားတို့ သတ်၍ မသေခဲ့သော ခင်ဗျာအား တချိန် ကြိုးစင်သို့ ပို့ မည့်အဖွဲ့ 